ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်မဖွယ်မရာပြုသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013 Aug;25(3):193-200.
Odlaug BL1, တပ်မက်သောစိတ် K သည်, Schreiber LR, Christenson, G, Derbyshire K သည်, Harvanko တစ်ဦးက, ရွှေ D ကို, Grant က je.
ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်စစ်မှန်တဲ့ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် CSB ၏သက်ရောက်မှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), အရွယ်ရောက်%3မှ 6% ကိုထိခိုက်ဖို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဤသည် epidemiological လေ့လာမှုကျောင်းသားတစ်ဦးကြီးများနမူနာသုံးပြီး CSB ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှုကိုခန့်မှန်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်များ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များ, စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
CSB များ၏ခန့်မှန်းပျံ့နှံ့ 2.0% ဖြစ်ခဲ့သည်။ CSB မပါဘဲဖြေဆိုသူနှင့်နှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာများ, စိတ်ဖိစီးမှု, ဆင်းရဲတဲ့ Self-လေးစားမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, compulsive ဝယ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် kleptomania မြင့်မားမှုနှုန်းမြင့်မားအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
CSB ငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားဘုံသည်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းတဲ့အကွာအဝေးလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သိသာထင်ရှားသောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်လျော့နည်းသွားအပြုအမူကိုထိန်းချုပ် CSB မကြာခဏသိသိသာသာဆက်စပ်ရောဂါရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။